Thursday June 08, 2017 - 06:28:44 in Articles by Super Admin
Lacagta oo bil walba ay maamulayaasha Warbaahinta madaxa banaan ka qaadan doonaan Xafiisyadda Madaxweyne Farmaajo, Ra’isulwasaare Kheyre iyo Gudoomiye Tabitd Abdi ayaa lagu xiray sharuud ku saabsan ineysan Warbaahinta heshiiskaas saxiixda baahin karin warar ka dhana Dowladda Federalka Somalia sida cambaareeynta Mucaaradka ,dhacdo maalmeedyadda dhinaca amaanka iyo musuqmaasuqa.
Marka laga reebo Goobjoog Fm , Idaacadaha iyo Tv-yadda ka hoowlgala Muqdisho oo heshiiskaas qaatay ayaa ka aamusay baahinta banaanbaxii ugu weeynaay ee shacab isu soo baxay ku xanibeen isu socodka Gaadiidka Muqdisho iyo Afgooye iskaga goosha.sidoo kalena waxeey joojiyeen baahinta seddex ka tirsan Askarta hubka dhigista Dowladda oo lagu dilay Xaafadda Carwo Iidka ee Muqdisho.
"Heshiiska lala galay Warbaahinta madaxabanaan waxaa ka mida ineysan sheegin qaraxyadda iyo dilalka Muqdisho ka dhaca laakiin fikir ahaan waan ka soo horjeedaa in la qariyo dilalka iyo qaraxyadda ay cadawga iyo Ciidanka dowladda geeystaan" ayuu yiri Masuul ka tirsan Gudoomiye ku xigeenadda gobolka Banaadir oo codsaday inaan magaciisa la xigan.
Xafiiska Madaxweyne Farmaajo wuxuu Tv-yadda bil walba siinayaa lacag dhan 3000$ ,halka Idaacadaha loo qoondeeyay min laba kun oo dollar ,iyadoo Website-yadda qaarna lagu qanciyay bishii kun dollar.
Xafiiska Ra’isulwasaare Kheyre wuxuu Tv’yadda siinayaa bil walba lacag kala duwan tusaale wuxuu Universal Tv u qoondeeyay 10,000$ toban kun oo dollar sida ay sheegeen qaar ka mida dalaaliinta u dhaxeeysa Warbaahinta iyo Xafiiska Ra’isulwasaaraha laakiin Tv’yadda kale ayuu u qoray 4000$ ilaa 5000$. halka Idaacaddaha iyo Website-yadda qaar ka midana loo qoray lacag u dhaxeeysa 3000 ilaa 2000 $ ,seddex kun ilaa laba kun oo dollar.
Xafiiska Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa lacagaha ugu badan siiyay Idaacado badan marka laga reebo Goobjoog Fm iyo Radio Shabelle,wuxuuna bil walba u qoray lacag dhan 5000$ shan kun oo dollar halka Tv-yadana uu ka qaatay seddex Tv oo kaliya.
Seddexda Tv ayaa loo kala qoondeeyay lacag u dhaxeeysa 8000 $ 4000$ iyo 3000 $ taas oo dhigaal ahaan ah, Sideed kun dollar,afar kun dollar iyo seddex kun oo dollar.
Warbaahinta Waagacusub waxeey guud ahaan diiday iney heshiiskaas nuxurkiisu yahay Laaluush la gasho seddexda Xafiis laakiin waxeey xasuusineysa Milkiilayaasha iyo Maamulayaasha Warbaahinta madaxabanaan in Dowladdda Soomaaliyeed si sharciya loogu leeyahay lacagta kabidda iyo horumarinta Warbaahinta madaxabanaan taas oo loo baahan yahay in si sharciya loo maro.
Sikastaba ha ahaatee, Waa Nasiibdaro in Madaxda Dowladda cusub ee Somalia lacagtii Canshuurta shacabka Muqdisho ku laaluushayaan Warbaahinta si afka loo qabto dhibanayaasha iyo Mucaaradka Soomaaliyeed ,loona daboolo musuqmaasuqa,tacadiyadda,gabood falka iyo fashiladda siyaasadeed ee madaxda Dowladda Federalka Somalia ku kacayaan habeen iyo maalin.